Map Company - RayHaber
HomeMap Ụlọ ọrụ okporo ụzọ
Railway ụlọ ọrụ na Turkey depụtara n'okpuru map. Ị nwere ike ịjụ ụlọ ọrụ kachasị gị nso site n'òtù, ị nwere ike inweta nkọwa zuru ezu gbasara ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ngwaahịa na map.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị adịghị ebe a zigara e-mail na iletisim@rayhaber.com!
Chọọ ngwa ngwa 10 km25 km50 km100 km200 km500 km1000 km1500 km
Map nke Ankaray | Map nke Ankaray Line na Ankaray Stops 11 / 04 / 2012 Anyị kwadebere okporo ụzọ dị larịị na ụzọ ụgbọ okporo ígwè Ankara na usoro okporo ígwè okporo ígwè Anrakay maka gị na mpaghara mmekọrịta: Ankaray Map: Ankaray Metro Line, Ankaray Stops - A1 metro line na-arụ ọrụ n'etiti Dikimevi- Aşti ụgbọ ala na njedebe dị ka ndị a: Tandoğan Beşevler Bahçelievler Emek AŞTİ Na-arụ ọrụ: 06: 00 - 24: Ije ozi n'agbata oge 00, Ankaray nwere njikọ na ụzọ ụgbọ okporo ígwè Ankara na ọdụ ụgbọ ala Kızılay. Ọnụ na ikike: Ankaray, nke e wuru na 1992 ma na-akwụ 550 nde German akara, malitere ọrụ ya n'oge okpomọkụ nke 1996. 8,5 bụ kilomita
TCDD Kütahya - Ụzọ ụgbọ okporo ígwè okporo ụzọ nke Balıkesir Railway A bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta na ụlọ ọrụ ahụ meriri obi ụtọ maka ọrụ nyochagharị okporo ụzọ okporo ụzọ n'etiti Gökçedağ na Nusrat Stations 16 / 01 / 2013 Ọhụụ ọhụrụ emeela ka obi dị mma maka owuwu nke ụgbọ okporo ígwè ọhụrụ dị n'etiti Gökçedağ na ụlọ ọrụ Nusrat. Dị ka ozi ndị Investments Magazine natara; a bịanyere aka na nkwekọrịta nke ụlọ ikpe nke GCF obiọma - Kolin Construction nkwonkwo ya na nkwekọrịta ahụ bịanyere aka na 28 pound. Maka ozi ndị ọzọ biko pịa: Ebe E Si Nweta Ego: Nkwụnye ego
TCDD Kütahya - Ụlọ ọrụ Redemption okporo ụzọ Balıkesir Railways A bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ya na ụlọ ọrụ ahụ meriri obi ụtọ maka imeghari okporo ụzọ okporo ígwè n'etiti Gökçedağ na Nusrat Stations. 21 / 01 / 2013 Ọhụụ ọhụrụ emeela ka obi dị mma maka owuwu nke ụgbọ okporo ígwè ọhụrụ dị n'etiti Gökçedağ na ụlọ ọrụ Nusrat. Dị ka ozi ndị Investments Magazine natara; a bịanyere aka na nkwekọrịta nke ụlọ ikpe nke GCF obiọma - Kolin Construction nkwonkwo ya na nkwekọrịta ahụ bịanyere aka na 28 pound. Dị ka a maara, ebinyere nkwekọrịta ahụ na ụlọ ọrụ Fermak Construction 2010 110 40.760.310,91 09 pound maka nkwekọrịta ahụ. N'oge a, anyị zutere ndị ọchịchị, üşt
TCDD 3. Region Ödemiş - Kiraz New Railway Project Survey - oru ngo - injinia nkwekọrịta nyere 22 / 03 / 2012 Turkish State Railways (TCDD) 3. Ngalaba mpaghara nke Demiryolu Ödemiş - Kiraz New Construction Railway; Akwukwo ihe omuma ohuru edere na nro maka. Survey, Project, Engineering, Procurement Et. Dị ka ozi ndị Investments Magazine natara; banyere ego nke 811.478,26 pound dị ka mkpebi nkwekọrịta mmeri na ụlọ ọrụ ahụ bịanyere aka na nkwekọrịta Aksa Project 416.115 pound. Dị ka a maara, ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ekere òkè na nke a bụ: Bosphorus Project 2. Ọ na-ewu 3. KMG Project 4. Ebe ZTM Engineering Source: Nkwụnye ego
TCDD Toprakkale - Ogige Ubi Abụọ Ọrụ Ụgbọ okporo ígwè Abụọ Ebinyere aka na ụlọ ọrụ ahụ nke meriri obi ebere maka ọrụ injinia na ọrụ ndụmọdụ 19 / 09 / 2012 Turkish State Demiryo (TCDD) Southeastern Anatolia Project si Enterprise Directorate General (ọdịiche) Action Plan "n'okpuru" Toprakkale - Garden Station Cross Ugboro abụọ Line Railway Gọọmenti, Project Engineering na Consulting Services "e dere ọhụrụ tolite metụtara ndị ị nweta. Dị ka ozi ndị Investments Magazine natara; Emere nkwekọrịta ahụ na ụlọ ọrụ SWS Engineering. Biko pịa maka ozi ndị ọzọ: Ebe E Si Nweta Ego: Nkwụnye ego
TCDD 1. Region Arifiye - Karaçam Railway Infrastructure Project 21 / 06 / 2013 TCDD 1. District Arifiye - larch Railway Infrastructure Project aka a nkwekọrịta na ụlọ ọrụ meriri ndị na-ewu obi: Turkish State Railways (TCDD) Property 1. Regional Directorate nke Real Estate na Construction na January 31 2013 anakọtara àjà ihe mere eme, Arifiye (+ 129 623) larch (+ 138 700) si Km New 9 2. Line Railway Infrastructure Construction obi e bipụta. Dị ka ozi ndị Investments Magazine natara; O kwuru 12.239.600 pound obi na-enye site na Sun Road Construction - Omer Akif Yazicioglu merie nkwonkwo ịmalite. 20.462.278,41 nkwonkwo ịmalite merie ndị obi na ndika eri nke nkwekọrịta e banyere June 06 2013 pound. Source ...
Konya Karaman Railway Line Project Contract Company Nọrọ maka nkwekọrịta 09 / 01 / 2014 TCDD Konya - Karaman Railway Line Project Gülermak merie ndị na-ewu obi - a kpọrọ Kolin Construction nkwonkwo ịmalite agreement. Turkish State Railways (TCDD) ga-ẹkenịmde site General Directorate of Property, "Konya - Karaman Stations Ugboro abụọ kpatara Line N'etiti ẹdude Scheme I. The Laghachi" e dere metụtara ndị ị nweta nke ọhụrụ tolite. Dị ka ozi ndị Investments Magazine natara; Gülermak merie ndị obi - Kolin Construction nkwonkwo ịmalite nkwekọrịta na òkù edildi.ortak mgbalị January 03 2014 235.025.754 pound n'elu nkwekọrịta ga-aka na-abịa n'ụbọchị. Ndika eri nke obi mara dị ka pound 438.143.568,78 16 ụlọ ọrụ ama-ekwe ha. Dị ka ị maara, March 11 ...
Okporo ụzọ azụ ụgbọ okporo ígwè ụzọ na okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè 02 / 04 / 2014 AYGM Ports Back Yard Road na Railway Connections Project nwe plan-ewu nke Dols obi - dolphin Engineering ndibọhọ a nkwonkwo ịmalite n'etiti Infrastructure Investment General Directorate (AYGM) 25 February 2014 ụbọchị na chikọta amụma, "Ports Back Yard Road na Okporo ígwè Njikọta Master Plan Study Advisory Service" emechara obi ụtọ. Dị ka ozi ndị Investments Magazine natara; Dolsar Engineering - Dolfen Engineering nkwonkwo venture merie obi na-enye nke 647.500 njikọ. A ga-abanye na nkwekọrịta ahụ n'oge a na ụlọ ọrụ ahụ. A kwadoro ụgwọ ọrụ ahụ dị ka 1.500.000 dịka. Altınok Consulting Boğaziçi Project Emay A gam akporo Mmetụta kacha mma Altın
Nkwekọrịta na ụlọ ọrụ na-emeri maka Nna-ukwu na-ezube maka Mwube nke Ọdụ Ụgbọ Mmiri Back Site Road and Connections Railway 10 / 04 / 2014 AYGM Ports Back Yard Road na Railway Connections Project nwe plan-ewu nke Dols merie ndị obi - dolphin Engineering aka a nkwekọrịta na nkwonkwo ịmalite Infrastructure Investments General Directorate (AYGM) 25 February 2014 ụbọchị na chikọta amụma, "Ports Back Yard Road na Okporo ígwè Njikọta Master Plan Study Ọhụụ ọhụrụ metụtara ọrụ ebere nke ọrụ ọrụ gbasara Danışmanlık. Dị ka ozi ndị Investments Magazine natara; Emere nkwekọrịta ahụ na 1.500.000 03 na April 2014 na Dolsar Engineering - Dolfen Engineering. Dị ka a maara, ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-akpọ maka obi ebere bụ ndị a: i
TCDD Kütahya - Ụzọ ụgbọ okporo ígwè okporo ụzọ nke Balıkesir Railway A bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta na ụlọ ọrụ ahụ meriri obi ụtọ maka ọrụ nyochagharị okporo ụzọ okporo ụzọ n'etiti Gökçedağ na Nusrat Stations
TCDD Kütahya - Ụlọ ọrụ Redemption okporo ụzọ Balıkesir Railways A bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ya na ụlọ ọrụ ahụ meriri obi ụtọ maka imeghari okporo ụzọ okporo ígwè n'etiti Gökçedağ na Nusrat Stations.
TCDD 3. Region Ödemiş - Kiraz New Railway Project Survey - oru ngo - injinia nkwekọrịta nyere
TCDD Toprakkale - Ogige Ubi Abụọ Ọrụ Ụgbọ okporo ígwè Abụọ Ebinyere aka na ụlọ ọrụ ahụ nke meriri obi ebere maka ọrụ injinia na ọrụ ndụmọdụ
Konya Karaman Railway Line Project Contract Company Nọrọ maka nkwekọrịta
Okporo ụzọ azụ ụgbọ okporo ígwè ụzọ na okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè
Nkwekọrịta na ụlọ ọrụ na-emeri maka Nna-ukwu na-ezube maka Mwube nke Ọdụ Ụgbọ Mmiri Back Site Road and Connections Railway
Ozi ndị ọzọ ...